(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 10:05:35
Mudane Madaxwayne, waa runtaa oo Kalluunku calool xanuun ayuu leeyahay, balayaadu waliba waa wada lafo oo haddii midh keli ahi kuu dhuumato
Waxa uu u yeedhay mid ka mid ah shaqaalihiisa, waxa uu ku yidhi; "Maanta waan daalay oo qado waafi ah ayaan u baahanahay'e, inanka cuntada karinaya inoogu dir Kalluun. Kalluun ayaan maanta aad ugu niyadsamahaye! ". Ninkii shaqaalaha ahaa ayaa yidhi; "Haye, Mudane Madaxwayne, Kalluunka waliba waad u baahan tahay oo daalka waa ka dawo, sidoo kalana waxa uu leeyahay Faytamiinno jidhka iyo maskaxdaba soo celinaya oo waan hubaa in kolka aad cunto aad firfircoonaan
badan ka heli doontid"
Madaxwaynihii ayaa ku yidhi; "Inkastoo calooshu igu xanuunto, haddana yeelkeed'e inoo dir.” Ninkii ayaa ku jawaabay; "Mudane Madaxwayne, waa runtaa oo Kalluunku calool xanuun ayuu leeyahay, balayaadu waliba waa wada lafo oo haddii midh keli ahi kuu dhuumato waa khatar, sidoo kelana yalaalugo iyo laabjeexna way u raacaan"!
Madaxwaynihii oo yaabban ayaa ninkii waydiiyay; "Waar miyaad xanuusanaysaa? Halkaad hal mar ammaan iyo dhaleecayn wada socda isugu daraysaa Kalluunka?"
Ninkii ayaa ku jawaabay; "Madaxwayne, anigu adigaan kuu shaqeeyaa ee Kalluunka uma shaqeeyo, wixii aad tidhaahdabana waan kugu raacayaa, haddaad ammaantana waan u kula ammaani, haddaad dhaleecaysana aakhiro ayaan u dirayaa"!
Dhacdo ka mid ah kumannaanka dhacdo iyo sheeko ee guulwadaynta indhaha la' ah ee ka dhacda dunida aynu ku noolnahay ayay dhacdadani tusaale u tahay! Waxa iyaduna la mid ah, Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin Boqor ah oo duurka u ugaadhsi tagay waxa uu la kala baxay leeb iyo qaansadiisii si uu ugu gano shinbir geed u dhaw saarnayd. Kolkii uu ku ganay ayuu la waayay, isla markiiba mid guulwade ah oo ag boodayay ayaa la soo booday; "Boqor, si wanaagsan ayaad yeeshay!" Boqorkii oo yaabban ayaa yidhi; “Oo maxaan wanaajiyay waaban la waayaye!" Ninkii ismaba uu dhibine aad yar ayuu ku jawaabay; "Boqoroow lamaad waayin'e shinbirta ayaad u naxariistay".
Waxa iyaduna aan kuwaas hore ka fogayn dhacdo kale oo la yaab lahayd. Waa Madaxwaynihii wadanka Masar, Jamaal Cabdinaasir oo khudbad ka jeedinaya aqalka Golaha Wakiillada ee dalkaas, kaddib markii ay isku dhaceen Masar iyo Suuriya. Waxa uu Madaxwayne Cabdinaasir yidhi isagoo Golaha hortaagan; "Waxa aan amray ciidamadeenna baddu in ay dhaqaaqaan oo ay Suuriya ku duulaan..." Isagoo halkaas maraya ayay xildhibaannadii sacab isla oogsadeen, kolkii ay sacabkii dhammaysteen ayuu hadalkiisii sii watay oo yidhi; "Haddana waxa aan ka fikirkay midawga carbeed oo waxa aan amray ciidamadeennii in ay soo laabtaan!”, sidii hore si ka badan ayaa haddana sacabkii isu qabsaday! Cajiib!
Guulwadaynta indhaha la' ee aan tilmaamaynaa waa taas ah in laba fal oo iska soo horjeeda daqiiqad gudaheed sacabka loo wada garaaaco!
Waa kii lahaa Abwaan, Maxamed Ibraahim Warsame -Hadraawi - Ilaahay caafimaad sareecan ah ha siiyee ;-
Dadka noocaas ah ee marwalba la hoos taagan Madaxda in xukuumadaha ay gadhwadeenka ka yihiin ay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa ee bulshada soo mara, waa kuwo khiyaamo qaran kula kacaya bulshada, sidoo kalana si aanay dareensanayn ,waxa ay hoojinayaan, ka ay ka hoos shaqaynayaan oo haadaamo ay uga tallaabsanayaan! Go'aanno badan oo aynu maanta la rafaadsannahay, waxa hubaal ah in aanay inta ugu badan yimaaddeen, haddii uu ninka talada hayaa helo cid gacanta qabata oo wixii wanaagsan u sheegta, wixii gef iyo gardarro ahna ka qabata!
Aynu dhanka kale u rogno hadda’e, ma aragtay marar badan, Wadaad, boqollaal “Aayadood” u soo qaadanaya, go'aan uu qaatay nin Madax ahi, si uu innoogu sheego in go'aan kaasi sax yahay? Yaah! Waxba ah yaabin akhriste, aadyar adiga oo aan dhibtoon waxa aad ogaata, “ isagu si waafiya ayuu u ogyahay inta badan, in aayadda iyo xadiiska uu luqunjibaadhayaa aanay halkaas munaasib ku ahayn”, Balse waa dhaqanka Guulwadaynta iyo Madaxwayne adigaan kuu shaqeeyaa oo halkaa la galaya!